ỌKA OKORO:EBEANỌ GA-ANỌ YA – hoo!haa!!
ỌKA OKORO:EBEANỌ GA-ANỌ YA
Abụja: Ebeanọ Dọkịnta Chimaroke Ogbonnịa Nnamani, Gọvanọ chịburu Enugwu Steeti ga-anọ kpọm kwem na ngosipụta Oka Okoro, ejije Nollywood pụrụ iche fọzịrị abalị asatọ.
Ngosipụta ejije nkeji otu narị n’iri abụọ a nke ga-enye ndị ọbụla omenala Igbo na-amasị obi ụtọ ga abụ n’ụlọ nkiri onyonyoo Genesis Cinema dị n’ụzọ ọdụ ụgbọ elu, Abụja n’abalị iri abụọ n’asaa nke ọnwa a, bụ Julayị.
Ndị ọzọ ga-abụ ndị ọbịa pụrụ iche ụbọchị ahụ gụnyere Dọkịnta Okwesịlịeze Nwodo bụ Gọvanọ chịburu Enugwu Steeti ochie, AVM Chris Chukwu, ọchịagha ụgbọelu laworo ezumike, Air Commodore Ben Ugwueke, ọchịagha ụgbọelu laworo ezumike, Mazi Frank Nweke (Nke nta), bụbu Mịnịsta ala anyị na- ahụ maka Mgbasa Ozi, wdg.
‘Oka Okoro’ sitere n’akụkọ banyere ụzọ ihe abụọ pụtara ihe mere na ndụ ndị Nenwe, obodo dị n’okpuru ọchịchị Aninri, Enugwu Steeti were gosi ụwa usoro obibi ndụ na nkwenye Ndigbo mgbe gboo.
N’okwu ya, Chinelo Ụzọigwe bụ onye isi ụlọ mmebe ejije Expadoc, ndị mebere Ọka Okoro kọwara na ejije a bụ nke mbụ n’ime ejije ndị ọzọ na-akọwapụta omenala Ndigbo n’ụzọ ndị na-eto eto ga-esi na ya were mụta ihe iji weta ezi agamnihu n’ala anyị.
Chiwetalu Agu, Diewait Ikpechukwu, Leo-Spider Osuji nakwa Stan K Amadị bụcha ndị na-èwù éwú na Nollywood sonyere na ya bụ ejije.
Previous Post: NỌNSO DIOBI ZIRI M ỤZỌ – YUL
Next Post: ENUGWU: NDỊ OJI EGBE GBARA FADA EGBE N’ỤZỌ NOMEH